कसरी तपाईंको राहदानी नवीकरण गर्ने यात्रा समाचार
राहदानी भनेको निश्चित देश द्वारा जारी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको साथ एक आधिकारिक कागजात हो ताकि यसको वाहक विश्व यात्रा गर्न सक्दछ, अन्य राज्यहरूमा प्रवेश गर्न वा छोडेर वा आफ्नो देशले त्यो राज्यलाई मान्यता दिएको प्रतीकको रूपमा। यो सार्वजनिक, व्यक्तिगत र हस्तान्तरण योग्य छैन र यसले यसको मालिकको पहिचान र राष्ट्रियता प्रमाणित गर्दछ।
यदि हामी निकट भविष्यमा विदेश भ्रमण गर्न जाँदैछौं भने, म्याद सकिएको पासपोर्ट वा समयावधि सकुन्जेल समस्या छ किनकि केही देशहरूले उनीहरूको इलाकामा प्रवेश गर्न दिदैनन् यदि यसको छ महिनामा म्याद सकिन्छ भने यसको सिमानाहरूमा पहुँच खोजिएको छ। त्यसकारण अधिकारीहरूले सँधै वैधता मिति नियन्त्रण गर्न सिफारिस गर्छन् र यसलाई छिटो नविकरण गर्न जान्छन् यदि समाप्ति मिति नजिक आयो। कसरी राहदानी नवीकरण गर्ने?
2 आवश्यक कागजात
3 नाबालिग पासपोर्ट
4 राहदानी मूल्य
5 आपतकालीन पासपोर्ट प्राप्त गर्नुहोस्
6 विदेशमा आपतकालीन पासपोर्ट
7 यात्राका लागि उत्तम र सबैभन्दा खराब पासपोर्टहरू के हो?
कि त तपाईंसँग म्याद सकिएको पासपोर्ट छ वा पहिलो पटकको लागि आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने स्पेनमा तपाईंले अनलाइन अपोइन्टमेन्ट गर्नुपर्नेछ वा ०060० कल गरेर। यदि हामी विदेशमा छौं भने हामीले स्पेनका दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूमा अनुरोध गर्नुपर्नेछ।
राहदानीका लागि आवेदन दिनको लागि कागजातहरू निम्न हुन्:
अघिल्लो राहदानी लागू
पासपोर्ट फोटो आकार ×२ × २ mill मिलिमिटर, रंगमा र सेतो पृष्ठभूमि सहित।
यदि माथिका कुनै कागजात हराइरहेको छ तर यात्राको कारण तत्काल छ र यो प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने, अस्थायी एक बर्षको राहदानी जारी गर्न सकिन्छ जबसम्म आवेदकले अन्य माध्यमबाट आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्न सक्दछ।
१ 14 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरू र अशक्त मानिसहरू विशेष नियमहरू द्वारा शासित छन्। जब राहदानी आवेदक नाबालिग हो र DNI छैन (किनभने ऊसँग स्वामित्व लिन बाध्य छैन), उसले सिभिल रजिस्ट्रीले जारी गरेको शाब्दिक जन्म प्रमाणपत्र provide महिना भन्दा अघि जारी गर्नु पर्नेछ जब जारी गर्ने आवेदन पेश भएको मिति भन्दा अघि पासपोर्ट को। यसले एनोटेशन समावेश गर्न अनिवार्य छ कि यो विशेष रूपमा राहदानी प्राप्त गर्न को लागी जारी गरिएको हो।
नाबालिग वा अशक्त व्यक्तिलाई राहदानी जारी गर्न, अभिभावक वा अभिभावकको अधिकार रहेको व्यक्तिको व्यक्त सहमति आवश्यक पर्दछ।, जुन राहदानी जारीको लागि सक्षम निकायलाई प्रदान गर्नुपर्नेछ। थप रूपमा, अभिभावक वा रिश्तेदारी सम्बन्धको सर्त पारिवारिक पुस्तक जस्ता यस उद्देश्यका लागि कुनै आधिकारिक कागजात प्रस्तुत गरेर मान्यता प्राप्त गर्नुपर्दछ।
राहदानी प्राप्त गर्नका लागि रकम २०१ 26 मा २eयूरो हो जुन जारी गर्ने अफिसमा नगद भुक्तानी गर्नुपर्नेछ वा इलेक्ट्रोनिक रूपमा भुक्तानको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। अनलाइन पासपोर्ट अनुरोध गरेको खण्डमा, संग्रह अफिसमा गरिनु पर्छ जुन अधिकतम २ व्यापार दिनको अवधिमा छनौट गरियो। ठूला परिवारहरूलाई यो पैसा तिर्ने छुट छ।
एडोल्फो सुरेज म्याड्रिड-बाराजास एयरपोर्ट, एक हो कि धेरै पर्यटकहरू प्राप्त गर्यो
आपतकालीन पासपोर्ट प्राप्त गर्नुहोस्
यदि तपाईंलाई तत्काल पासपोर्ट चाहिएको छ भने, जुन दिनमा तपाईंले यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईं यो विशेष अफिसमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जरुरी राहदानी जारी गर्नका लागि म्याड्रिड-बाराजस एयरपोर्टहरू (T2 को तल्लो २) र बार्सिलोना एल प्रेट (T4 मा)
तिनीहरू केवल आपतकालीन पासपोर्ट जारी गर्छन् यदि तपाईं उडान उही दिन त्यो दिन वा बिहान 10am अघि छ। अर्को दिन र उडानहरूको प्राथमिकता उनीहरूको बोर्डि time समय अनुसार हुन्छ।
यस अवस्थामा, कागजातहरू जुन आपतकालिन पासपोर्ट प्राप्त गर्न आवश्यक छ:
बोर्डि pass पास वा इलेक्ट्रोनिक टिकट।
पासपोर्ट फोटो 32२ × २ mill मिलीमीटर, रंगमा र सेतो पृष्ठभूमिमा।
२ 26 यूरो को शुल्क तिर्नुहोस्।
यी विशेष कार्यालयहरूले केवल स्पानियर्डहरूको लागि पासपोर्ट जारी गर्छन्। विदेशीहरूले आफ्ना दूतावासहरूमा जानै पर्छ। थप रूपमा, तिनीहरूले कि त भिसा जारी गर्दैनन्, त्यसैले यदि कुनै देशले यसको सिमाना भित्र जान अनुरोध गर्‍यो भने तपाईंले सम्बन्धित दूतावासमा जानु पर्छ।
विदेशमा आपतकालीन पासपोर्ट
विदेशमा तपाईंको राहदानी हराउनु वा चोरी गर्नु भनेको एक धेरै तनावपूर्ण अवस्था हो जुन हामी आफैंलाई छुट्टीमा भेट्टाउन सक्छौं।
यस अवस्थामा, पहिलो काम भनेको पुलिसमा जानुहोस् र रिपोर्ट गर्नुहोस्। त्यसोभए तपाईंले स्पेनी दूतावास वा कन्सुलेटमा जानु पर्छ ताकि उनीहरूले तपाईंलाई अस्थायी राहदानी जारी गर्न सक्दछन् यसले तपाईंलाई स्पेनमा फर्कन अनुमति दिन्छ। त्यहाँ एक पटक, तपाईले नयाँ राहदानीको लागि आवेदन गर्नुपर्नेछ।
यात्राका लागि उत्तम र सबैभन्दा खराब पासपोर्टहरू के हो?
एक जिज्ञासाको रूपमा, केहि देशहरू जस्तै जर्मनी, स्वीडेन, स्पेन, ब्रिटेन वा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग धेरै राम्रा पासपोर्टहरू छन् उनीहरूले १ 170० भन्दा बढी राज्यहरू पहुँच गर्न सक्दछन्। यसको विपरित, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सिरिया, लिबिया, सुडान वा सोमालिया जस्ता देशहरूमा कम यात्री पासपोर्ट छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » कसरी राहदानी नवीकरण गर्ने